Overcast, imwe yeakanakisa maapplication ekuteerera podcasts, inogadziridzwa nenhau dzinonakidza | IPhone nhau
ari podcast iri kuwedzera, mamwe ma audios anotiunzira a nzira nyowani yekunzwisisa radio kunguva dzinomhanya. Uye ndezvekuti vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuteerera podcasts chaizvo nekuda kwechikonzero chakafanana chekuti vanhu vazhinji vanyorera kunyorera vhidhiyo masevhisi uye kusiya echinyakare terevhizheni: nguva.
Fomati, iyo Podcast, yakafambidzana neApple kubva kune izvo zvekare iPods. Uku ndiko kukosha uko Apple inopa podcasting kuti isu tinotove neayo echinyakare Anwendung pane edu zvishandiso akatsaurirwa kunyika yepodcasts. Unoda here zvimwe dzimwe nzira dzeApple's Podcast app? Nhasi tinotaura nezvekuvandudzwa kutsva kwe kwidibira, Anwendung kuteerera podcasts izvo ichangobva kugadziridzwa nenhau dzakakosha. Mushure mekusvetuka tinokupa zvese zvese ...
Sezvatiri kutaura, Overcast ichangobva kuvandudzwa nenhau dzinonakidza. Pakati penyaya dzese tinowana zvavafonera Smart Resume, nzira itsva ye tangazve kuteerera kune podcast yekutenda kwatinokwanisa kuzoteerera kumasekondi mashoma isati yasvika nguva yekupa kutamba kune chitsauko, ndiko kuti, kana ukangotangazve chitsauko iwe unoteerera mashoma mashoma apfuura kuti uenzanise zvaunonzwa. Hezvino izvo zvitsva mune ino Overcast 4.1 yekuvandudza, imwe yeakanakisa maapplication ekuteerera kumaPodcast paApp Store:
- Sarudzo nyowani ye zvinobva zvadzima zvikamu 24 maawa apedza.
- Iko mukana wekudzivirira podcasts ne password.
- Chinhu chitsva smart tangazve- Dzokera mumasekonzi mashoma mushure mekumiswa kuti ikubatsire kuyeuka chikamu, uye gadzirisa zvishoma mazwi akatsvaga pazvinogoneka
- Yakagadziriswa zvipembenene zvine chekuita nekukanganiswa kweodhiyo, kutamba kwekumira, kutadza kurodha pasi uye kunyangarika kwekutamba kwekutamba
- Zvinyorwa zvakakura kwazvo zvekutamba izvozvi zvinongoratidzira mazana mazana / mashoma episheni epashure ekuvandudza mashandiro eapps kune vashandisi vane yakawanda nhamba yekunyorera.
- Rutsigiro rutsigiro rwangova rwePad chete, lKutenderera kwe iPhone kwakaratidza kudhura zvakanyanya kuchengetedza zvakanyanya kushandiswa.
Saka ikozvino unoziva, kana iwe uchitsvaga imwe app inosangana neyako yekuda kuteerera podcast, uye Apple yemuno haigutsikane newe, Overcast ndeimwe yeakanakisa paApp Store. An app iyo yemahara kunyangwe iine premium vhezheni iyo ichavhura ese ayo maficha, zvisinei, isu tato kukuudza iwe kuti zvakajairika kushandiswa haufanire kuti upfuure mubhokisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Overcast, imwe yeakanakisa maapplication ekuteerera podcast, inogadziridzwa nenhau dzinonakidza
Fitbit Versa, ndiko kubheja kutsva kwaFitbit pazvipfeko